लम्जुङमा मध्यरातमा आएको पहिरोमा पुरिँदा सुतिरहेका श्रीमान श्रीमती र छोराको मृत्यु ! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/लम्जुङमा मध्यरातमा आएको पहिरोमा पुरिँदा सुतिरहेका श्रीमान श्रीमती र छोराको मृत्यु !
लमजुङ – लमजुङ बेँसीशहर नगरपालिका–७ का एक स्थानीयको घरमाथिबाट खसेको पहिरोका कारण तीन जनाको निधन भएको छ । स्थानीय ३३ वर्षीय दीपक तामाङको घरभित्र गए राति पौने १२ बजेतिर अविरल वर्षासँगै पहिरो पस्दा ३३ वर्षीय दीपकसहित नौ वर्षीय छेवाङ तामाङ र २६ वर्षीया विमाया तामाङको निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ । घर पुरिँदा दीपक तामाङ, उनकी श्रीमती र छोराको निधन भएको खुलेको हो ।
मृतक तामाङको घरदेखि करिब २५/३० मिटर माथिबाट आएको पहिरो घरभित्र छिर्दा उहाँको परिवारका तीनै जनाको निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रहरी निरीक्षक ओमप्रकास पुनले बताउनुभयो । घरभित्र पुरिएको अवस्थामा शव सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीय मिलेर उद्धार गरेका थिए ।
२६ वर्षीया विमायाको राति १ बजे र दुई जनाको राति साढे २ बजे शव निकालिएको प्रहरीको भनाइ छ । उद्धारपश्चात् उनीहरुको शव परीक्षणका लागि बेँसीशहर नगरपालिका–८ स्थित जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा राखिएको छ । त्यस्तै, मृतक ३३ वर्षीय तामाङको घरमा काम गर्न बसेका तीन जना घाइते भएका छन् ।
घाइते हुनेमा सोही वडा सातविसे घर भएका २६ वर्षीय सन्तबहादुर गुरुङ, बेँसीशहर नगरपालिका १० घर भएका २० वर्षीय सुमन गुरुङ र २३ वर्षीय अनिल गुरुङ रहेको प्रहरीको भनाइ छ । घाइते तीन जनालाई नै जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको र उनीहरुको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरी निरीक्षक पुनले बताउनुभयो
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षद्वारा लगातार तेस्रो दिन पनि माइतिघरमा धर्ना
आफ्नो सफलताको लागि , जस्तोसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढ्नुस ! नपढे तपाईलाई प’छुतो हुनेछ !
दुहबीका सुजनको हत्यामा संलग्न आशंकामा ३ जना पक्राउ, २० बर्षीय झाले हत्या गरेको स्वीकार